प्रहरी महानिरीक्षक खनालको भोली देखि अनिवार्य अवकाश, भावी आइजीपीको हुने भन्ने अझै अन्यौल ? – Upahar Khabar
प्रहरी महानिरीक्षक खनालको भोली देखि अनिवार्य अवकाश, भावी आइजीपीको हुने भन्ने अझै अन्यौल ?
प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७६, सोमबार ०९:४२ February 10, 2020
काठमाण्डौ – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालको मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाश हुदै छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उहाँले अनिवार्य अवकाश पाउन लाग्नुभएको हो । उहाँ मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा बस्ने भए पनि नयाँ आईजीपीबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । महानिरीक्षक खनालसँगै १८ डीआईजी र तीन एआईजीले अवकाश पाउँदै छन् ।
बहालवाला आईजीपी अवकाश पाउनुअघि नै बिदामा बसेर भावी आईजीपीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने चलन भए पनि नयाँको टुंगो नलाग्दा यो सम्भव हुन सकेन ।
खनालले आफ्नो कार्यकाल बढाउने कोशिस गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । खनाल दुई वर्षअघि २०७४ फागुन २८ मा नेपाल प्रहरीको २६ औं प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो ।
खनालपछि महानिरीक्षकमा तीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरु दाबेदार छन् । प्रदेश १ का ठाकुर ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तारिणीप्रसाद लम्साल र प्रहरी प्रधान कार्यालयका सूर्यप्रसाद उपाध्याय दाबेदार रहे पनि उनीहरुमध्ये को आईजीपी हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
उनीहरूको ३० वर्षे सेवा अवधि आउँदो असारमा सकिंदैछ । तीनमध्ये पनि ज्ञवाली र लम्सालको नाम चर्चामा छ । ज्ञवाली प्रदेश–१ को प्रहरी मुख्यालय विराटनगर र लम्साल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।
दुवै जना २०४७ साल असार २५ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । अब नियुक्त हुने प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरी सङ्गठनको २७ औंँ प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् । सरकारले सोमबार या मंगलबारसम्म नयाँ महानिरीक्षकको नाम टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ ।
इटालीको बीआइटी मिलानो टुरिजम एक्स्पो मा नेपाली सामाग्रीको स्टल, सिन्धुपाल्चोका जनप्रतिनिधि सहित सरोकारवालाको सहभागिता
विकास निर्माणका काम अत्यन्त सुस्त भयो : प्रधानमन्त्री ओली